दियाको डायरी बाट – И®B
दियाको डायरी बाट
२०३७ साल बैशाख २० गते म जन्मेकी थिएँ। रुपले धपक्क बलेकी उज्याली मलाई देखेर मेरा बाआमाले मेरो नाम दिया राख्ने निर्णय गर्नुभयो रे। दिया माने दियो। घरमा,
मेरा बाआमा को जिन्दगीमा उज्यालो छर्दै म ‘यती दिन कि’ बाट
‘यती हप्ता कि’, ‘यती हप्ता कि’ बाट ‘यती महिना कि’ भईछु, मुस्कुराउन थालिछु, बामे सर्न थालिछु, गूडीया खेलाउने भईछु। मलाई उठ्ने बित्तिकै गुडिया चहिन्थ्यो रे, दिनभरी गुडियासँग खेल्दाखेल्दै निदाऊँथेँ रे। त्योताका हाम्रोतिर बिजुली बत्ती हुँदैनथ्यो त्यसैले आमाहरु टुकी बाल्नु हुन्थ्यो। सधैंझैं एक साँझ म गुडियासँग खेल्दा खेल्दै निदाइछु। आमा टुकी बालेर भान्छातिर जानुभएछ। म निन्द्रामा कोल्टे फेरिछु, गुडिया हातमै रहेछ, कोल्टे फेर्दा टुकीमा झोसिएछ अनि प्लस्टिकको गुडिया बल्न थालेछ। मेरो चर्को रुवाइ सुनेर आमा मसम्म आइपुग्दा गुडिया सहित मेरो आधा अनुहार डढिसकेको रहेछ। त्यो साँझ मेरो जुन जस्तो अनुहारमा कहिल्यै नहट्ने दाग लाग्यो। त्यस दिन देखी यो दिया निभेकी निभेइ छे।
म तेत्तिसकी पुरा भएँ। अझै अबिवाहित छु, कुरुप छु, कुमारी नै छु। आजकाल त त्यती हुँदैन तर म बिस-पच्चिसकी हुँदा नै मैले धेरै तनाबको खेप्नु पर्यो। हामी दुई बहिनी, म घरकी जेठि छोरी, बहिनी म भन्दा दुई बर्षले कान्छी। उमेरको हिसाबले हामी दुबै दिदिबहिनीको बिहे गर्ने बेला भईसकेको थियो। बाआमालाई पनि अप्ठेरो, जेठी छोरीको बिहे नगरी कसरी कान्छी लाई अन्माउनु? म अभागीनी, बिनागल्ती बालखैमा कुरुप भएर बसेकी, मसँग बिहे गर्न कोही केटा तयार हुँदैनथे। बाआमाले दशतिरका आफन्तलाई गुहारेर मलाई देखाउन पाहुना देखाउँथे।। मलाई थाहा थियो, मेरो रुप देखेपछी मजस्ती सँग बिहे गर्न कोही राजी हुँदैनन। र पनि बाआमाको मन राखिदिनुपर्यो पाहुना हरुको अगाडि गएर ठडीइदिन्थें, चियाका गिलाँस टकार्थेँ। आमा घुम्टो कसेर ओडाइदिनुहुन्थ्यो ताकी सकभर पुरै अनुहार नदेखियोस, म खुकुलो बनाइदिन्थें ताकी पुरै अनुहार प्रस्ट देखियोस। म कसैलाई ढाँटेर, छलेर, वास्तविकता लुकाएर सम्बन्ध गाँस्ने पक्षमा थिइन। हरेकजसो बर्ष, बैशाख, असार, मङ्सिर, फाल्गुन आउन लागेपछी यी सिलसिला दोहोरिन्थे। तर एक साल बहिनीले प्रेम विवाह गरेर मलाई ठुलो गुन लगाएर गई। त्यस उप्रान्त मलाई बिहेको दवाब कम हुँदै गयो।
घरिघरी मलाई लाग्छ शायद त्यो साँझ अग्नी देवताले मलाई कुरुप होइन कि छोरीबाट छोरा बनाइदिनु भएको हो आजीबन बाआमाको सेवामा समर्पित भैरहने छोरा,श्रवण कुमार जस्तै। नत्र यदी म राम्री भएकी भए म पनि विवाह गरेर गैसक्थें हूँला अनि कसले मेरा बा आमाको ख्याल राख्दो हो? धन्न म यस्ती भएँ र ठिकै भयो।
मन बुझाउने न हो, यस्ता फाल्तु कुरा सोच्दै बस्यो भने केही हदसम्म भए नि तनाब कम हुँदो रहेछ। तर चौबिस घण्टामा केही मिनेट यस्ता कुरा सोचेर, केही घण्टा निदाएर, केही घण्टा काममा ब्यस्त भएर, केही समय अन्य कार्यमा ब्यस्त भएर केही क्षणको लागि आफ्नो यथार्थ बिर्सिइएला, तर बास्तकिकता त सँधै बास्तबिक नै रहन्छ। ‘म आँफुलाई हेर्दै हेर्दिन, नहेरे पछी त्यस्तो केही सोचाइ नै आऊँदैन’ भनेर म अनेकन ब्यर्थ कोशीश गर्छु। तर सक्दिन।
घरभरी ऐना छन्, बहिर निस्क्यो घरी गाडीको सिसामा, घरी पसलका सिसामा आँफैलाई देख्न पुग्छु। आफ्नै मुहार देखेर घृणा लाग्छ, अनि घण्टौ रुन्छु। म पनि अरुसरह नै एउटी स्त्री हूँ, अनुहार जेजस्तो भए पनि मन त सद्धे छ, सबैले झैँ सास फेर्छु, सपना देख्छु, कल्पना गर्छु, दुख्दा रुन्छु, खुशी हुँदा हाँस्छु, कोही राम्रो मान्छे देखे सास रोकिन्छ, मुटु जोडले धड्किन थाल्छ, तर यही एउटा दागले गर्दा म बाँच्न भने पाएकीछैन। सास फेर्नुलाई बाँचेको भन्छन भने त हो म बाँचेकि छु तर मेरो सोचाइमा बाँच्नु भनेको सपना जिउनु हो, कसैको साथ एवम् माया पाउनु हो, हरेक चाहना पुरा हुनु हो। मेरा सपना के पुरा होलान र खै? बाआमाले बाहेक मलाई अरु कसले माया मान्ला र? मेरा अनगिन्ती चाहना, जिबनसाथीको चाहना, घरजम गर्ने चाहना, यौन चाहना, आमा बन्ने चाहना, र अन्य कती कती….. तर कुनै कहिल्यै पुरा हुने देख्दिन, अनि रुन आऊँछ।
मेरा संगीहरु श्रिँगारिएर हिँडेको देख्दा रहर लागेर आऊँछ, त्यसरी नै सँजिएर हिँड्न मन लाग्छ। तर रहर लागेर के गरूँ, त्यो आधा ओठमा लाली दलेर कसरी हिंड्नु? त्यो एउटा सद्धे आँखामा मात्र गाजल लगाऊँदा के सुहाउला र खै? यसो सोच्छुु
म त्यो दिन नडढेकी भए आज कस्ती देखिँदी हूँ, ऐना अगाडि उभिएर दुई हातले डढेको आधा अनुहार छोप्छु अनि एक आँखाले आँफैलाइ हेर्छु। देख्छु आमाले भन्ने गरेकी उज्याली दिया को अर्ध झलक। जब देख्छु, तब आँशुका भल बग्न थाल्छन्, अनि घण्टौं रोकिन्नन् ।….
नेपाली चलचित्र #मौन मेरो समिक्षा – #NRB
2 thoughts on “दियाको डायरी बाट”
Basant KC says:
Very nice writing bro..next part chai kahile aauxa ni?
दियाको डायरी को बाकी अंस कैले आउछ दाई कौतुहलता भयो